ကိုယ်ဝန်ရင့်မာနေချိန် ဖောက်ပြန်တဲ့ ရည်းစားကို Khloe Kardashian ဘာလို့ခွင့်လွှတ်လိုက်လဲ?
ကိုယ်ဝန်ရင့်မာနေချိန် ဖောက်ပြန်တဲ့ ရည်းစားကို Khloe Kardashian ဘာလို့ ခွင့်လွှတ်လိုက်လဲ?
11 Jul 2018 . 1:30 PM
မိန်းမသားဆိုတာ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှုချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ကိုယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းဆီမှာပဲ ပုံအပ်စေချင်သူမျိုးပါ။ တစ်သက်မှာတစ်ခါ သေမင်းနဲ့စစ်ခင်းရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်ဘဝမျိုးမှာဆို ပိုလို့တောင် ချစ်သူခင်ပွန်းသည်ကို အားကိုးစိတ်ဖြစ်မိတတ်သူပါ။
ဒါပေမယ့် နာမည်ကျော်ကြား အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ Kardashian မျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်သူ Khloe Kardashian ကတော့ အချစ်ရေး ကံမကောင်းရှာပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သူမရဲ့ အတူနေချစ်သူ နာမည်ကျော် NBA ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမား Tristan Thompson တစ်ယောက် Khloe ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာရှိနေခဲ့ချိန်မှာတောင် နောက်ထပ်မိန်းမတွေအများကြီးနဲ့ ပွေရှုပ်ရုံသာမက သူနဲ့အကြီးအကျယ် သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ မထင်မရှား Model Lani Blair နဲ့လည်း ဇာတ်လမ်းတွေရှိနေခဲ့မှန်း သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်မှုအရှိန်အဝါကြီးသလောက် ခပ်ချေချေမိသားစုဖြစ်တဲ့ Kardishian မျိုးနွယ်ဝင် မေမေလောင်း Khloe တစ်ယောက်ကတော့ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကို ဒီအဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးကို ပြည်ဖုံးကားချပြီး Tristan ကို ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသတဲ့။
အဲ့ဒီလောက် ဆိုးရွားတဲ့ အပြုအမူ ဖောက်ပြန်မှုကြီးကိုတောင် ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ တကယ့် အံ့မခန်းပါပဲ။ သူမ ရှိရက်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ Tristan နဲ့ နောက်ထပ်ကလေးတစ်ယောက်လိုချင်သေးလို့ပါတဲ့။
Khloe နဲ့ Tristan တို့ဟာ ၂၀၁၈ ဧပြီလထဲမှာပဲ True Thompson ဆိုတဲ့ သမီးချောလေးကို မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့လိုဖောက်ပြန်မှန်းသိခဲ့ပြီးနောက် Khloe တစ်ယောက် Tristan ကို သူမမျက်လုံးအောက်မှာဘဲ ထားကာ စားအတူ၊ သွားအတူ၊ TV ကြည့်ရင်တောင် သူမဘေးနားတူတူကြည့်စေခဲ့ပြီး ဘာလုပ်လုပ် Tristan ဘေးမှာ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် ပွေရှုပ်တတ်သူ Tristan ကတော့ Khloe တစ်ယောက်သမီးလေး True ကို သိပ်ရတဲ့အချိန်တစ်နာရီလောက်မှာတောင် Lani Blair နဲ့ Facetime တွေပြောနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Facetime ထဲမှာ Lani နဲ့ Cleveland ကို တူတူပြန်ဖို့ မစောင့်နိုင်တော့တဲ့ အကြောင်းတွေ၊ Khloe တစ်ယောက် သူ့ကို ဘယ်လောက်ထိ ချုပ်ချယ်နေတဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြဦးမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့။
Tristan ကတော့ Khloe နဲ့ပြတ်လည်း အေးဆေးဖြစ်နေပေမယ့် Khloe ကတော့ ဒီယောက်ျားမှ ဒီယောက်ျားဖြစ်နေပုံပါပဲ။ ခုချိန်မှာတော့ Khloe နဲ့ Tristan တို့ဟာ တိတ်တဆိတ်စေ့စပ်ခဲ့ပြီး Khloe အနေနဲ့ မကြာခင်မှာ Tristan နဲ့ လက်ထပ်ဖို့ထိ စိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီလို့ ကြားသိရပါတယ်။
Kardashian တစ်မိသားစုလုံး နဲ့ Khloe ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အကြီးအကျယ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကြားက Khloe တစ်ယောက်ကတော့ Tristan ကို သူမဘယ်လောက်ယုံကြည်ကြောင်း သူသိစေချင်တဲ့အတွက် Tristan ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ချက်တောင်မမေးခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုလည်း ဘယ်သူတားတားမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆင်နွှဲဖို့ အချစ်ကြီးသူ Khloe တစ်ယောက်တော့ တဇွတ်ထိုး ရှေ့ဆက်နေပါပြီ။
ယောက်ျားတစ်ယောက် ခြေမငြိမ်ဘဲ မိန်းမမျိုးစုံနဲ့ ပွေနေ၊ ရှုပ်နေတာကို သိရက်နဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ထပ်လိုချင်လို့ အရာရာနားလည်ခွင့်လွှတ်ခဲ့တဲ့ Khloe ကတော့ အချစ်ကြီးတဲ့နေရာမှာ စံတင်လောက်စရာပါပဲ။
ကိုယျဝနျရငျ့မာနခြေိနျ ဖောကျပွနျတဲ့ ရညျးစားကို Khloe Kardashian ဘာလို့ ခှငျ့လှတျလိုကျလဲ?
မိနျးမသားဆိုတာ ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ ဂရုစိုကျမှုခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေို ကိုယျတဈဦးတဈယောကျတညျးဆီမှာပဲ ပုံအပျစခေငျြသူမြိုးပါ။ တဈသကျမှာတဈခါ သမေငျးနဲ့စဈခငျးရတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျသညျဘဝမြိုးမှာဆို ပိုလို့တောငျ ခဈြသူခငျပှနျးသညျကို အားကိုးစိတျဖွဈမိတတျသူပါ။
ဒါပမေယျ့ နာမညျကြျောကွား အောငျမွငျသူတဈယောကျဘဝကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ပွီး ဒိတျဒိတျကြဲ Kardashian မြိုးနှယျဝငျဖွဈသူ Khloe Kardashian ကတော့ အခဈြရေး ကံမကောငျးရှာပါဘူး။ အကွောငျးကတော့ သူမရဲ့ အတူနခေဈြသူ နာမညျကြျော NBA ဘတျစကတျဘောကစားသမား Tristan Thompson တဈယောကျ Khloe ကိုယျဝနျအရငျ့အမာရှိနခေဲ့ခြိနျမှာတောငျ နောကျထပျမိနျးမတှအေမြားကွီးနဲ့ ပှရှေုပျရုံသာမက သူနဲ့အကွီးအကယျြ သတငျးတှထှေကျနတေဲ့ မထငျမရှား Model Lani Blair နဲ့လညျး ဇာတျလမျးတှရှေိနခေဲ့မှနျး သတငျးတှထှေကျပျေါလာတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
အောငျမွငျမှုအရှိနျအဝါကွီးသလောကျ ခပျခခြေမြေိသားစုဖွဈတဲ့ Kardishian မြိုးနှယျဝငျ မမေလေောငျး Khloe တဈယောကျကတော့ အံ့သွစရာကောငျးလောကျအောငျကို ဒီအဖွဈအပကျြတဈခုလုံးကို ပွညျဖုံးကားခပြွီး Tristan ကို ခှငျ့လှတျပေးခဲ့ပါသတဲ့။
အဲ့ဒီလောကျ ဆိုးရှားတဲ့ အပွုအမူ ဖောကျပွနျမှုကွီးကိုတောငျ ခှငျ့လှတျပေးလိုကျရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကတော့ တကယျ့ အံ့မခနျးပါပဲ။ သူမ ရှိရကျနဲ့ ဖောကျပွနျနတေဲ့ Tristan နဲ့ နောကျထပျကလေးတဈယောကျလိုခငျြသေးလို့ပါတဲ့။
Khloe နဲ့ Tristan တို့ဟာ ၂၀၁၈ ဧပွီလထဲမှာပဲ True Thompson ဆိုတဲ့ သမီးခြောလေးကို မှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပွီး အဲ့လိုဖောကျပွနျမှနျးသိခဲ့ပွီးနောကျ Khloe တဈယောကျ Tristan ကို သူမမကျြလုံးအောကျမှာဘဲ ထားကာ စားအတူ၊ သှားအတူ၊ TV ကွညျ့ရငျတောငျ သူမဘေးနားတူတူကွညျ့စခေဲ့ပွီး ဘာလုပျလုပျ Tristan ဘေးမှာ အရိပျတကွညျ့ကွညျ့နခေဲ့ရပါတယျတဲ့။
ဒါပမေယျ့ ပှရှေုပျတတျသူ Tristan ကတော့ Khloe တဈယောကျသမီးလေး True ကို သိပျရတဲ့အခြိနျတဈနာရီလောကျမှာတောငျ Lani Blair နဲ့ Facetime တှပွေောနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီ Facetime ထဲမှာ Lani နဲ့ Cleveland ကို တူတူပွနျဖို့ မစောငျ့နိုငျတော့တဲ့ အကွောငျးတှေ၊ Khloe တဈယောကျ သူ့ကို ဘယျလောကျထိ ခြုပျခယျြနတေဲ့အကွောငျးတှေ ပွောပွဦးမယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျတဲ့။
Tristan ကတော့ Khloe နဲ့ပွတျလညျး အေးဆေးဖွဈနပေမေယျ့ Khloe ကတော့ ဒီယောကျြားမှ ဒီယောကျြားဖွဈနပေုံပါပဲ။ ခုခြိနျမှာတော့ Khloe နဲ့ Tristan တို့ဟာ တိတျတဆိတျစစေ့ပျခဲ့ပွီး Khloe အနနေဲ့ မကွာခငျမှာ Tristan နဲ့ လကျထပျဖို့ထိ စိတျလှုပျရှားနပေါပွီလို့ ကွားသိရပါတယျ။
Kardashian တဈမိသားစုလုံး နဲ့ Khloe ရဲ့ သူငယျခငျြးတှေ အကွီးအကယျြဆနျ့ကငျြနတေဲ့ကွားက Khloe တဈယောကျကတော့ Tristan ကို သူမဘယျလောကျယုံကွညျကွောငျး သူသိစခေငျြတဲ့အတှကျ Tristan ရဲ့ ပိုငျဆိုငျမှုတှနေဲ့ပတျသကျပွီး တဈခကျြတောငျမမေးခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ဒီမင်ျဂလာပှဲကိုလညျး ဘယျသူတားတားမဖွဈဖွဈအောငျဆငျနှဲဖို့ အခဈြကွီးသူ Khloe တဈယောကျတော့ တဇှတျထိုး ရှဆေ့ကျနပေါပွီ။
ယောကျြားတဈယောကျ ခွမေငွိမျဘဲ မိနျးမမြိုးစုံနဲ့ ပှနေေ၊ ရှုပျနတောကို သိရကျနဲ့ ကလေးတဈယောကျထပျလိုခငျြလို့ အရာရာနားလညျခှငျ့လှတျခဲ့တဲ့ Khloe ကတော့ အခဈြကွီးတဲ့နရောမှာ စံတငျလောကျစရာပါပဲ။